သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဗွီအိုအေသီးသန့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း (သတင်းဓါတ်ပုံများ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာ လွှတ်တော်ကသာ အဓိက တာဝန် အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး သမ္မတနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် မဟုတ်ဘူးလို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည် တပြည်လုံးကိစ္စကို လူလေးယောက် ထဲနဲ့ ဆွေးနွေးတာဟာ မပြည့်စုံဘူး လို့မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အဲဒီလိုပြောတာပါ။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ မကြာခင်ရက်ပိုင်းက အစိုးရစစ်တပ်ကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA ရဲ့ အရာရှိလောင်း အယောက် ၂၀ ကျော် သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ ပိုလုပ်သွားရ မယ်လို့ သမ္မတကပြောသလို ဒီလို သွေးထွက်သံယို ပဋိပက္ခတွေ တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ပိုပြီးဖွင့်လှစ်သွားရမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက် လို့တော့ ပြည်ပက လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေပေမယ့် ရခိုင်ဒေသဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီး လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေ တယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေးခွဲခြား လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာရင် တရားဥပဒေအတိုင်း အရေးယူသွား မယ်လိုိ့ဆိုပါတယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာဟာ အမှန်တရားကို လူထုသိစေချင်လို့ ပေးထားတာဖြစ်ပြီး သူသာ ဒုတိယ သမ္မတသက်တမ်း ဆက်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ရင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးကို ဦးစားပေးလုပ်သွားမယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောသွားပါတယ်။
ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ဌာနမှူးနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပြည့်အစုံ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့သမ္မတကြီးခင်ဗျား။ ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေကို အခုလို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကို အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော် ပထမဆုံး မေးချင်တာကတော့ သမ္မတကြီးရဲ့ ပထမ အစိုးရသက်တမ်းပေါ့နော်၊ ပထမ သက်တမ်းက အခုလာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒီ…. ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးပြီ ဆိုလို့ရှိရင် သက်တမ်းက ဒါ…. ပြီးဆုံးတော့မယ်ပေါ့။ ဒီသက်တမ်း ကာလအတွင်းမှာ ဒါ…. သမ္မတကြီးတို့ အစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အတော်လေး ကျေနပ်အားရမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေအပြင်ကို တချိန်က တင်းမာနေခဲ့တဲ့ အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေဖက်ကလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားတာတွေ ဖြေလျှော့ပေးတာတွေ လုပ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကိုလည်း ဟို…. အစောပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ချီးကျူး ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလပိုင်း၊ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ဒီ…. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဟာ နောက်ဆုတ် မသွားဘူး ဆိုရင်တောင်မှဘဲ၊ တန့်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုလေးတွေ တချို့ထွက်တာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတကြီးရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက ဘယ်လိုရှိပါမလဲခင်ဗျား။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ အဲဒီတော့၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အဆင့် (၃) ဆင့် ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာပေါ့။ ပထမအဆင့်ကတော့ (First Wave) ပေါ့။ First Wave ဆိုတာတော့ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ မရှိပဲနဲ့၊ ညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကို ဒါ….. ကျနော်တို့ စတက်တက်လာခြင်း ဒီဟာကို ကြိုးစားပြီးတော့ ကျနော်တို့ လုပ်တာပေါ့။ ဒါ First Wave ပါပဲ။ နောက်တခါ Second Wave ကတော့၊ ကျနော်တို့ ခုနကလို ဘာတွေ ကျနော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲ။ အဲဒီတော့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရမယ့်ဟာတွေက ကျနော်တို့ ခုနကလို နိုင်ငံရေးအရ ကျနော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့ဟာမျိုး။ စီးပွားရေးအရ ကျနော်တို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲတာတွေ။ နောက်တခါ အုပ်ချုပ်ရေးအရ ကျနော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေ။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့ ခုနကလို တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့အတွက်က ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို မြင့်တင်ပေးမှ ဒါ….. တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုတော့ အဲဒီတော့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမြင့်တင်ရေးပါ အပါအ၀င် ဒီ (၄) ချက်ကို ဒုတိယ ကျနော်တို့ Second Wave အနေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကျနော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီ….. Third Wave မှာတော့ ကျနော်တို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခုနကလို ကျနော်တို့ ဟိုဒင်းတွေပေါ့လေ…… ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီ လက်တွေ့ လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေ ဘယ်လောက် ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်သလဲ။ Results တွေပေါ့။ Results တွေ ဘယ်လောက်လောက် လုပ်နိုင်မလဲ။ အဲဒီတော့ Results တွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှ ဒီလောက်တော့ လုပ်နိုင်တယ်၊ ရှေ့ကို ကဲဆက်ပြီးတော့ တွန်းပြီးတော့ တို့လုပ်ကြရအောင် ဆိုပြီးတော့ Third Wave က ဒီအတိုင်း ကျနော်တို့ သွားနေတာ။ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ Third Wave လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ သက်တမ်းကလည်း ပြီးမြောက်သွားမယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခုနကလို ဟို….. တိုးတက်တာတွေလည်း ရှိတာ အမှန်ပါဘဲ။ အခက်အခဲတွေ၊ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ဒါတွေ ရင်ဆိုင်ရတာလည်း ဒါတွေ အမှန်ပါဘဲ။
မေး။ ။ အပြင်ဖက်ပိုင်းမှာ အခု အဓိကအားဖြင့် ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒါ….. ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စ၊ နောက် အထူးသဖြင့် ဒီ….. အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလို ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုရင်၊ အစောပိုင်းက သမ္မတကြီး ပြောတဲ့အထဲမှာလည်း ပါပါတယ်။ ပထမဆုံး ဦးစားပေး အနေနဲ့က သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ရပ်စဲပြီးတော့ ဒါ…. အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကနေပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတွေအထိ သွားမယ်ဆိုတာ ဒါ…. နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဦးစားပေး မူဝါဒတရပ်အနေနဲ့ ချပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဒီလို လုပ်နေတဲ့ ကြားထဲကပဲ အထူးသဖြင့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကချင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်၊ KIO အဖွဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကချင်အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တပ်မတော်ဖက်က ထိခိုက်တာကြားရသလို၊ မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း တပ်မတော်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကချင်အဖွဲ့က ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းက လူငယ်လေးတွေ (၂၀) ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ကျနော်တို့ ကြားရတယ်။ ကြားရတယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို တားဆီးနိုင်ဖို့၊ ဒါမမှဟုတ် ဒီကိစ္စတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဒီကိစ္စတွေကနေပြီးတော့ ပဋိပက္ခကြီးကြီး ထပ်ပြီးဖြစ်မသွားစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ အရေးတကြီး ဘာများလုပ်ချင်သလဲ၊ အရေးတကြီး ဘာများပြောချင်တာရှိလဲခင်ဗျ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ အဲဒီတော့ ဒီဟာလေး ရှင်းရမယ်ဆိုရင်၊ အခြေခံကတော့ ခုနကလို ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးကိစ္စဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီ….. ပြည်သူ အများစုရဲ့ ဆန္ဒပေါ့လေ၊ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ အစိုးရကနေပြီးတော့ ပြည်အများစု ဆန္ဒဖြစ်သလို၊ ကျနော်တို့ အစိုးရရဲ့ ဆန္ဒလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ အဲဒီတော့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲကြဖို့အတွက်လည်း နှစ်ဖက်က အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့ ဒါ….. တွေ့ဆုံပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ သို့သော်လည်း တချို့အပိုင်းလေးတွေက ကျနော်တို့ အလျှော့ အတင်းလေးတွေ ရှိတယ်။ အလျှော့အတင်းလေးတွေလည်း တချို့ လျှော့ပေးနိုင်တာတွေ လျှော့ပေးနိုင်တယ်။ တချို့ မပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်း ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားကြ ပြုကြတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ ရပ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ ရပ်စဲချင်တယ်။ ရပ်စဲချင်တယ်။ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း ဟို….. တစ်ဖက်ထဲကြောင့် ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်မှာ ဒါ…. ပြဿနာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ နှစ်ဖက်မှာ ပြဿနာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက်၊ ဟိုလူကလွန်တယ်၊ ဒီလူကလွန်တယ်နဲ့ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ ပြောနေလို့ရှိရင်လည်း ကျနော်တို့ ပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သို့သော်လည်း ဒီကနေ့အထိကတော့ ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုလေးတွေ ရှိသေးလို့ ဒီလိုတွေ ကျနော်တို့ ဖြစ်နေတာ။ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်စဲချင်တယ်။ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်စဲဖို့အတွက် ကျနော်တို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြတယ်။ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ကြမလဲ။ တပ်ကိုလည်း ကျနော်တို့ ပြောတာပါပဲ။ တဖက်ကိုလည်း ကျနော်တို့ ညှိတာပါပဲ။ တပ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း မင်းတို့ စခန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ တိုက်တာ ပြုတာ ဘာညာ မင်းတို့လုံးဝ မလုပ်နဲ့။ သို့သောလည်းပဲ၊ လူဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အသက်တော့ ကိုယ်က ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တော့ ရှိရမှာကိုး။
ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံ ကာကွယ်ယုံမှအပ ကျန်တာ ဘာမှမလုပ်နဲ့။ ဒါတွေလည်း တပ်အပိုင်းက သူတို့ လိုက်နာပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သို့သော်လည်း မြေပြင်မှာ အောက်ခြေမှာကျတော့ တချို့ကိစ္စလေးတွေက ဟိုလူကစပစ်တယ်၊ ဒီလူက စပစ်တယ်နဲ့ ဒီပြဿနာလေးတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်က စောင့်ကြည့် လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ ကျနော်တို့က ဒါကို တည်ဆောက်ရမယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ ခုနကလို ဆက်ဆံရေးစခန်းတွေ ထားရမယ်။ အဲဒီတော့ ဆက်ဆံရေးစခန်းတွေလည်း ကျနော်တို့ ဒါ…. ထားဖို့အတွက် ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ နှစ်ဖက် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ သူကတော့လွန်တယ်၊ သူကမှားတာ၊ အဲဒီတော့ နောက်တခါ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်မယ်၊ စသည်အားဖြင့် ဒီအဖွဲ့တွေလည်း ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ကျနော်တို့က လုပ်ထားပြီးပြီ။ လုပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ဒါတွေနဲ့ ကျနော်တို့က မဖြစ်အောင် ထိန်းသွားရမှာပါ။ အဲဒီတော့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကျနော်တို့ကလည်း မဖြစ်စေချင်ဘူး။ တစ်ဖက်ကလည်း ခုနကလို ဟုတ်လား….. ထိခိုက် ကျဆုံးမှု ဘာညာ ရှိတယ် ပြုတယ်ဆိုရင် ဟို….. တိုင်းပြည်အတွင်ဘဲ နစ်နာတာကို။ တစ်ဖက်ကလည်း ထိခိုက် ကျဆုံးမှုတွေ ရှိတယ် ပြုတယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကဘဲ နစ်နာတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဒါနိုင်ငံသားတွေဘဲ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ နှစ်ဖက်စလုံးက မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲဒီတော့ တပ်ကိုတော့ ကျနော်ပြောပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခုနကလို ဖြစ်တဲ့ ပြုတဲ့ကိစ္စတွေကို ခင်ဗျားတို့ ခုနကလို အင်တာဗြူးလုပ်လိုက်ပါ။ မှန်မှန် ကန်ကန်နဲ့ ပြည်သူတွေလည်း သိသွားရအောင်။ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်မှာ ပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်ကြတာကိုး။ တစ်ဖက်ထဲပစ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ဖက်ပစ်လို့ ဒါ…. ပြဿနာ ဖြစ်ကြတာကိုး။ ဒီလိုဖြစ်တာတွေက ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာတွေကို သွားပြီးတော့ ခုနကလို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ခုနကလို ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက်ကို သွားပြီးတော့ ဒါ…...ခုနက အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျနော်တို့ကတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ နှစ်ဖက်ကို။
မေး။ ။ ဒါနဲ့ဆက်စပ်လို့ပဲပေါ့နော်၊ တခြား ကျနော်တို့ ဒီ….. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်ကို အများကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့၊ လေ့လာ ပြီးတော့ ဝေဖန်ကြတဲ့၊ ဟို….. တိုင်းတာကြတဲ့ အခြေအနေတခုပေါ့။ အဲဒါက ဒီ….. အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်ကပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး သူရဦးရွှေမန်းက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းလေးတခုက တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ။ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပြင်ကို သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်း တပ်မတော်အပေါ်မှာ သမ္မတကြီး အနေနဲ့လည်း သြဇာအာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်အနေနဲ့ သမ္မတကြီးတို့ရဲ့ စေတနာနဲ့၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲရေးဟာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ တပ်မတော်ကို သြဇာသုံးပြီးတော့ ဘယ်လိုများ တိုက်တွန်းပေးနိုင်ပါသလဲ၊ ဘယ်လို အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲရေး၊ အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပုဒ်မ (၄၃၆) ပြောင်းလဲရေးမှာ ဘာတွေများ တိုက်တွန်းပေးနိုင်သလဲ၊ ဘာတွေများ တိုက်တွန်းပေးဖို့ ရှိသလဲဆိုတာလေးကို တစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသည် အဓိက ခုနကလို တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ။ ဒုတိယကတော့ ပြည်သူပဲ။ အစိုးရကလည်း ဘာလုပ်လိုက်ပါ၊ ပြင်လိုက်ပါ၊ မပြင်လိုက်ပါနဲ့ ကျနော်တို့ ပြောလို့မရဘူး။ တပ်ကလဲသွားပြီးတော့ ခင်ဗျား ဒါပြင်လိုက်ပါ၊ မပြင်လိုက်ပါနဲ့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ တပ်ကို ကျနော်တို့က ခင်ဗျားတို့က ဒါပြင်ဖို့အတွက် ပြောလိုက်ပါ၊ ဒါမပြင်ဖို့အတွက် ပြောလိုက်ပါ ကျနော်ပြောလည်း ဘာမှ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ ခုနကလို တပ်ကပြောလည်း ခင်ဗျား မပြင်နဲ့ဗျာဆိုလို့လဲ လွှတ်တော်ထဲကနေ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ပြင်လို့ရတာပဲ၊ ခုနကလို။ ဒါပြင်ပါဗျာ ဆိုလို့လဲ လွှတ်တော်ထဲကနေ သူတို့ မဲနဲ့ခွဲ ဆုံးဖြတ်တယ်၊ မဲအရ သူတို့က အရေးသာမှု မရှိဘူးဆိုရှိရင်လည်း ဒါဟာ ခုနကလို ဟိုဒင်းဖြစ်မှာပဲ။ အဓိကကတော့ ခုနကလို လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပဲ။ သမ္မတရဲ့ အဆုံးအဖြတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်လဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ဒီကိစ္စ ပြင်ဖို့ မပြင်ဖို့ကိစ္စက သမ္မတက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သွားပြီးတော့ ပြောစရာလည်း ကျနော်တို့ ဒါ….. မရှိပါဘူး။ အကြောင်းလဲ မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အဓိက အရှင်းဆုံးကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
ပထမဦးဆုံးက ခုနကလို လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ လွှတ်တော်ကပဲ ပြင်သင့်တယ်၊ မပြင်သင့်ဘူး၊ ဒါကို ခုနကလို ဟုတ်လား သူ့ Procedure လည်း ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီ Procedure အတိုင်း လုပ်သွားဖို့လိုတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုပြင်၊ ပြင်လို့မရတဲ့ဟာတွေကျလို့ရှိရင် ခုနကလို ဟိုဒင်းနဲ့ Referendum လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ ဟိုထဲမှာ အတိအကျ ပြောထားတာပဲ။ ပြင်ဆင်ရေး မပြင်ဆင်ရေးက တိုက်ရိုက် သမ္မတတို့၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့ တိုက်ရိုက် ကျနော်တို့က ပတ်သက်မှု မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ သမ္မတကြီးက မကြာသေးခင်ကပဲ သမ္မတကြီးရဲ့အိမ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့သူ (၁၄) ဦးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဆွေးနွေးပွဲက အချိန်သတ်မှတ်ချက်အရကော၊ အခြေအနေ အချိန်အခါ အရရော လေ့လာသူတွေရဲ့ အနေအထားအရကတော့ သဘောထားအမြင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖလှယ်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်ခဲ့ဘူး၊ တွေ့ဆုံတဲ့သဘောလောက်ပဲ ရှိခဲ့တယ်၊ ရှေ့ဆက်တိုးရဦးမယ့် အနေအထားမျိုး ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်တာ ကျနော်တို့ ကြားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဒါ….. လူထုလေးစားရတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင် တဦးအနေနဲ့က အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုနေတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ သဘောမျိုး၊ ဒါမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ် ဆိုတာကိုဘဲ ဆက်ပြောနေတော့၊ ဒီ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဖို့ တောင်းဆိုမှုအပေါ်ကို သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးချင်လဲခင်ဗျ၊ ဒါဟာ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အနေအထားရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ခင်ဗျားမေးတဲ့ မေးခွန်းက အင်မတန် မေးသင့် မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းပါဘဲ။ အဲဒီတော့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ သဘောထားခြင်း တူတာတွေရှိသလို၊ မတူတာတွေ ကျနော်တို့ ရှိမှာပါဘဲ။ အဲဒီတော့ တူတာတွေကို ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ကြရအောင်။ မတူတာတွေကို ကျနော်တို့ ခုနကလို ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ဒီအတိုင်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်အရ ကျနော်တို့ လုပ်သွားကြရအောင်ဆိုတာ ဒါ….. ကျနော်တို့ရဲ့ မူဝါဒပါဘဲ။ ကျနော်တို့ မူဝါဒပါ။
ကျနော်တို့ ဒီအထဲမှာ အချင်းချင်းမပြောနဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့တောင်မှ ဒီမူဝါဒနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်သွားတာပါ။ မတူတာတွေရှိတယ်၊ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ကျနော်တို့ လက်ခံရမယ်။ တူညီတာတွေလည်း ကျနော်တို့ရှိတယ်။ တူညီတာတွေကို တွဲပြီးတော့ လုပ်ကြမယ်။ မတူညီတာတွေကျလို့ရှိရင် ခုနကလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနိုင်အရှုံးတွေနဲ့ ပထုတ်ပစ်မယ့်အစား ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ ဒီအတိုင်း ကျနော်တို့ လုပ်သွားကြရအောင်။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ အခြေခံ မူပါဘဲ။ နောက်တစ်ခုက ခုနကလို ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ကျနော်တို့ကို တောင်းဆိုလာတယ်။ (၄) ယောက် တွေ့ကြ ပြုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုလာတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့ အရေးကိစ္စဟာ ကျနော်တို့ (၄) ယောက်ထဲနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ကျနော်တို့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာလား။ တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့ကိစ္စကို ကျနော်တို့ (၄) ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဆုံးအဖြတ် ပေးတာ၊ ဆွေးနွေးတာဟာ ဒါ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းတခု။ သို့သော်လည်း ဒီ (၄) ယောက်ထဲနဲ့ ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ပြုမယ်၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကတော့ ကျနော်ကတော့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ်။ မပြည့်စုံဘူး ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကဲ….. တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ ချဲ့လိုက်ကြရအောင်။ ဒါ….
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုလို့ရှိရင် အစိုးရပိုင်းက ကျနော်လည်းတက်တယ်၊ ဒုသမ္မတ (၂) ယောက်လည်း တက်တယ်။ လွှတ်တော်ပိုင်းကဆိုရင်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတက်တယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတက်တယ်။ နောက်တခါ ပါတီတွေ။ ပါတီတွေဆိုရင် အခု ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ပါတီက - ပါတီ (၄၀) ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ပါတယ်။ ပါတီ (၄၀) ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေလည်း ကျနော်တို့ တက်တယ်။ တပ်မတော်ကဆိုလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်တယ်၊ ဒုချုပ်လည်း တက်တယ်။ အဲဒီတော့ (၄) ယောက်နဲ့ စာလို့ရှိရင် ဒီလူတွေဟာ ခုနကလို များများနဲ့ပိုပြီးတော့ ဆွေးနွေးတာက တိုင်းပြည်အတွက် ပိုပြီးတော့များ မကောင်းဘူးလား၊ ခုနကလို။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ (၄) ယောက်ထဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကျဉ်းလည်း ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ အများနဲ့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးကြရအောင်။ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကတော့ မှန်တဲ့လက္ခဏာ။ သို့သော်လည်း အများနဲ့ဆွေးနွေးတာက တိုင်းပြည်အတွက်က ပိုပြီးတော့ အကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒါ….. ကျနော့်ရဲ့ ခံယူချက်အရ ကျနော်တို့ ဒီလို ဟိုဒင်းလုပ်တာပါဘဲ။ ဆွေးလည်း ဆွေးနွေးပြီးပြီ။ ဒါဟာ ရုပ်ပြအနေနဲ့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ အစည်းဝေးမှာလည်း ပြောလိုက်တယ်။ မကြာ မကြာ ကျနော်တို့ တွေ့ကြရအောင်။ မကြာ မကြာ ဆွေးနွေးရအောင်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံရေး စေတနာပါဘဲ။
မေး။ ။ အချိန်အပိုင်းအခြားအရ ဒါဆိုလို့ရှိရင် (၄) ပွင့်ဆိုင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ (၁၄) ပွင့်ဆိုင်ပေါ့နော်။
ဖြေ။ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ ခုနကလို၊ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကတော့ တယောက်ထဲလည်း တွေ့နေကြတာ၊ တဦးချင်းတွေ တွေ့နေကြတာ ရှိတာဘဲ။ အဲဒီတော့ ( ၄) ယောက်ထဲ ဆွေးနွေးမယ့် အစား၊ အများနဲ့ ဆွေးနွေးတာက ပိုပြီးတော့ ကောင်းမလားဆိုပြီး ဒီ Concept နဲ့ ကျနော်တို့ သွားနေတာပါ။
မေး။ ။ ဒီ အများနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်တော့လောက်မှာ ဆက်ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်တော့လောက် ထပ်လုပ်ဖို့ ရှိဦးမလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်ထင်တယ်။ အချိန်တော့ ကျနော်တို့က သတ်မှတ်ထားတာတော့ မရှိဘူး။ ခန ခန ကျနော်တို့ တွေ့နိုင်လေ ကောင်းလေပါဘဲ။ ကျနော့်သဘောထားကတော့ ဒီအတိုင်းရှိတယ်။ ဒီလူတွေကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအရ တစ်ဦးချင်း ကျနော်တို့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘဲ။ ပါတီဆိုလို့ရှိရင် ဒါ အားရစရာကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီ (၄၀) ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေ တက်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း (၄) ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကို သူတောင်းဆိုတာကလည်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခုနကလို သူတို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ဒီလို တောင်းဆိုတာပါ။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ သူတစ်ယောက်ထဲထက် ကျန်တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌတွေလည်း ပါတာက ပိုပြီးတော့ မကောင်းဘူးလား။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီ….. ဟိုဒင်းအတိုင်းကို ယူဆပြီးတော့ ဒါ တိုင်းပြည်အတွက်ပါဘဲ။ အများနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်တာက ပိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က ဒါ….. ပိုပြီးတော့ ပြည့်စုံတယ်ပေါ့။ ပိုပြီးတော့ အချက်အလက်တွေ ပိုပြီးတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ကျနော်တို့ ရမယ်။ ဆိုတော့ - ဒီအမြင်နဲ့ ကျနော်တို့က ဒါကို လုပ်တာပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ထပ်လည်း ကျနော်တို့ တွေ့မယ် ပြုမယ်။ တွေ့ဖို့ ပြုဖို့လည်း အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တွေ့သွားမှာပါ။
မေး။ ။ အခု ပထမဦးဆုံး တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးမှာပေါ့နော်၊ တကယ်လို့များ နောက်တခါ ဒီလိုပဲ (၁၄) ဦး ထပ်တွေ့ကြမယ် ဆိုလို့ရှိရင် အကြောင်းအရာကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ ဘယ်လို ဦးစားပေးအကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးကြဖို့ ရှိနိုင်မလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်ထင်တယ်၊ အဲဒီမှာတော့ ကျနော်တို့ အချက် (၃) ချက်ကို ကျနော်က ဟိုဒင်း လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီအချက် (၃) ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခုနကလို တိုင်းရင်းသားစည်းလုံညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးကိစ္စတွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခုနကလို ဒီ….. တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စတွေ။ အဲဒီတော့ အဓိကကတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ကတော့ ဒီကိစ္စတွေကတော့ အရေးအကြီးဆုံးပါဘဲ။ နောက်တခါ ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့ထားတာ မရှိပါဘူး။ ပြောချင်တဲ့ဟာ ပြောလို့ရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ဟာကို ဆွေးနွေး။ သို့သော်လည်း အချိန်ကတော့ ကျနော်တို့ စဉ်းစားတယ်။ အချိန်ကျတော့ ဒီဆွေးနွေးတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဟို….. နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲကြီးတွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ၊ အချိန်လေးကို ကန့်သတ်ပေးတယ်၊ အများကြီးဆိုတော့။ ဒါတောင်မှ ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ကို ၂ မိနစ်၊ ၃ မိနစ်လောက် ဆွေးနွေးကြ၊ ပြုကြတာဆိုတော့ (၁၄) ယောက်ဆိုတော့ ခင်ဗျား မြောက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ အချိန်အများကြီး ကျနော်တို့ ဟိုဒင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကန့်သတ်ထားတာ၊ ချုပ်ခြယ်ထားတာ မရှိဘူး။ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ဟာကို ခင်ဗျားတို့ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်ကတော့ ဆွေးနွေးမယ်။ ကျနော့်အပိုင်ကတော့ ကျနော်က ဒီလိုပြောတယ်။ ဒါတွေကလည်း တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက် အကုန် အကျုံးဝင်တဲ့ကိစ္စတွေပါဘဲ။ တော်တော်လည်း သူတို့ဆွေးနွေးကြတာပါ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း။ တပ်မတော်အပိုင်းကလည်း တချို့ကိစ္စလေးတွေကို လျှော့ပေးဖို့၊ ပြုပေးဖို့ တပ်မတော်နဲ့လည်း ဒီလို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ပြောကြ ပြုကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါက အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အများနဲ့ဆွေးနွေးကြတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိုဖြစ်လာတာပေါ့။
မေး။ ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီ….. အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးက ဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ ဒီအချက်အပေါ်မှာပဲ နိုင်ငံတကာက အထူးတလည် စိုးရိမ်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်ဝေဖန်တယ်၊ ပြောဆိုကြတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ်မှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ဒီ….. လူနဲစုအရေး၊ အဲဒါအပြင်ကို မကြာသေးခင်ကပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရော၊ သမ္မတ အိုဘားမားပါ ပြောသွားတဲ့ သူတို့အခေါ် ရိုဟင်ဂျာပေါ့နော်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ဒီဘက်က ဘန်ဂါလီအရေးကိစ္စမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံ၊ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်။ အလားတူဘဲ၊ မြန်မာပြည် ပြည်တွင်းမှာ ဒီ….. ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ အတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုတွေပေါ့နော်၊ အဲဒါမျိုးလေးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရော ဒီကိစ္စတွေကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ထားတာတွေ ရှိနေလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အစိုးရပိုင်းကတော့ ခုနကလို ကျနော်တို့ရဲ့ Constitution မှာလည်း ပါပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခုနကလို လူမျိုး ခွဲခြားတာ မရှိစေရဘူး။ ဘာသာခွဲခြားတာ ကျနော်တို့ မရှိစေရဘူး။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဘာသာကြီး (၄) မျိုး ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီဟာကို ခုနကလို ပဋိပက္ခအသွင်နဲ့ဆောင်အောင် ခုနကလို ပြည်တွင်းကရော၊ ပြည်ပကရော လှုံ့ဆော်နေတာတွေ ခင်ဗျားတို့လည်း အသိပါ။ ဒီဟာတွေ မဖြစ်နိုင်အောင် အစိုးရကတော့ တတ်နိုင်သလောက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျနော်တို့ ထိန်းနေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျနော်တို့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ ထည့်ထည့်ပြီး ပြောနေတာတွေရှိတယ်။
တစ်ဖက်ကလည်း လုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလို ပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက ဒီ ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်တဲ့လူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ကျနော်တို့ အရေးယူတာတွေ ဘာတွေ ကျနော်တို့ ဒါတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်ပက ဒီကနေ့ သူတို့စိုးရိမ်နေသလို ဟိုဒင်း ရခိုင်ဖက်မှာလည်း ကျနော်တို့ဒါတွေ မရှိပါဘူး။ တချို့ကတော့ ညှဉ်းပန်းလို့၊ နှိပ်စက်လို့၊ လှေတွေနဲ့ ထွက်ပြေးကြတယ် ပြုကြတယ်ဆိုတာ ဒါကို သတင်းတွေက ချဲ့ကားပြီးတော့ ဒါကို ရေးကြ ပြုကြတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီအထဲကနေ ထွက်ပြေးဖို့အတွက်နေနေသာသာ ခုနကလို ဒီအထဲမှာ နေချင်ကြတဲ့သူတွေက များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတယ်၊ လုပ်ကိုင် စားသောက်လို့ရတယ်။ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် လယ်ယာတွေရှိတယ်၊ နေထိုင်ဖို့အတွက် မပူရဘူး။ ဆိုတော့ ဒီကနေပြီးတော့ ထွက်ပြီး ပြေးကြ၊ ပြုကြတယ်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့ ဘာညာဆိုတာ ဒါတွေက တချို့ ဟိုဒင်းဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သဘောထားအမြင်တမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ ဒီလိုတွေ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် ရေးကြ ပြုကြတာပါ။ ဒီကနေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာမှ ကျနော်တို့ ဆိုးဆိုးရွားရွား မရှိပါဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲ။
ပြည်ပကအဖွဲ့တွေဆိုလိုရှိရင်လည်း ကူညီသင့်တာတွေကို ၀ိုင်းပြီးတော့ ကူညီနေပါတယ်။ ကူညီတဲ့နေရာမှာတော့ ကျနော်တို့ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဒီမှာရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေ ကျနော်တို့ တမျိုးမမြင်အောင် မျှမျှတတလေးနဲ့ လုပ်ပေးပါ။ ဟိုဘက်မှာ ဒါတွေကူညီတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဘက်မှာ ဒါတွေ ကူညီပေး။ ဆိုတော့ လက်မခံတွေ ဘာတွေလည်း မရှိပါဘူး ဒီကနေ့တော့။ အဲဒီ ကျနော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း ကျနော်တို့ အောက်ခြေအထိ ဆင်းဆင်းပြီးတော့ အမြဲတမ်း ကျနော်တို့ ထိတွေ့ပြီးတော့ ဟိုဒင်း လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီကတော့ ဒီ….. ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း ကျနော်တို့ တွေ့နေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့နေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျနော်တို့ ဒီ….. ဟုတ်လား မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒီ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့နေတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ခုနကလို UN Agency အဖွဲ့တွေနဲ့၊ MS အဖွဲ့တို့ ဘာတို့ဆိုတာလည်း အခု ကျနော်တို့ ဒါ လုပ်နေတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ဒါ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေနဲ့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ကြ ပြုကြတယ်။ အဲဒါ အကုန်လုံးက ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေအထားရှိတာပေါ့။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်း ကျနော်တို့ သိသလောက်ကတော့ အခုကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းပါဘဲ။ ပြည်တွင်းမှာလဲ ဘာသာရေးအရ လှုံ့ဆော်တာတွေ ဘာတွေရှိတယ်။ ဒီလှုံ့ဆော်တဲ့ဟာတွေကတော့ ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာတွေက မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေ။ ဒါတွေကို မလုပ်ဖို့အတွက်လည်း ကျနော်တို့က ဟုတ်လား…… ဒီ သတင်းတွေ ဘာတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ ထည့်ပြီးတော့ ပြောတယ် ပြုတယ်။ တကယ် ကျနော်တို့ ဟိုဒင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် လုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဥပဒေအရ ကျနော်တို့က ဒါ လုပ်ရမှာပါ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးက၊ တရားဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ကြ ပြုကြရမှာပဲ။
မေး။ ။ အဲ့ဒီတော့ အထူးသဖြင့် ဒီရခိုင်ပြည်ကိစ္စ နောက်ပြီးတော့ ပဋိမက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိစ္စတွေမှာ ဆိုရင် ဒီလိုအထင်လွဲ အမြင်လွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ သတင်းမှားကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တို့ သတင်းသမားတွေ အနေနဲ့လည်း ၀င်ပြီးတော့ ကြိုးစားပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှ အမှန်တရားကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးချင်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီတော့ သမ္မတကြီးတို့ဘက် ကလည်း သတင်းလွပ်လပ်ခွင့်ပိုင်းကို ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မေးခွန်းလေးမေးရင်းနဲ့ ပန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့က ဟို….. အကျိုးတရားကို ရှေ့ရှုပြီးးတော့ပေါ့နော်၊ ပြည်သူတွေကို ခုနကလို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသိပေးချင်တယ်။ ပြည်သူတွေကို ခုနကလို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပညာပေးချင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ခုနကလို မှန်ကန်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ ဖြစ်လာစေချင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဟုတ်လား မှန်ကန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွေးအခေါ်တွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က ၀မ်းသာအားရနဲ့ လက်ခံရမှာပါ။ ဘယ်သူဘဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ဘယ်အဖွဲကို မဆို ခုနကလို ပြည်သူတွေကို အမှန်အကန်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ သိစေချင်တယ်။ အမှန်အကန်အတိုင်းမြင်စေချင်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း ကို ခုနက လို ကျွန်တော်တို့ ပို့စေချင်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒပါဘဲ။ ဒါ….. ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာတွေက ကျနော်တို့ ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဒါ ကူညီပေးတယ်လို့တောင် ကျွန်တော်တို့က ပြောလို့ရမှာပါ။
မေး။ ။ အခုဆိုလို့ရှိရင် သမ္မတကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို တွေ့ဆုံပြီးတော့ ခွန်စိုက်အားစိုက်နဲ့ ဖြေကြားပေးတယ်။ လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေလည်း သွားသွားလာလာနဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာ မြင်ရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အလားတူဘဲ အစောက ပြောခဲ့သလို ဒီ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအောင် အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဒါ….. သမ္မတကြီးရဲ့ ပထမသက်တမ်းက ကုန်ဆုံးပြီပေါ့နော်။ ကုန်ဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဒုတိယ သက်တမ်းမှာရော ထပ်ပြီင်္းတော့ တာဝန်ထမ်းချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပါသလားခင်ဗျ။ တကယ်လို့များ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခု လုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေထက် ပိုပြီးတိုးတက်လာအောင် ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘာတွေများ လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိသလဲ၊ ဘာတွေများလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ အခု ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော်တင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်သူဘဲ ခုနကလို တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ တက်လာတက်လာ တိုင်းပြည် အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်တွေကိုတော့ ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တွန်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သွားစေချင်တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့လုပ်နေတာဟာ ဟုတ်လား ဒီပန်းတိုင်ကနေစထွက်ပြီးတော့ ခရီးလမ်းတခုကိုတော့ ကျနော်တို့ ရောက်နေတာတော့ သေချာပြီ။ ဘယ်နေရာအထိ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အတိအကျ ကျွန်တော်တို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် တနေရာကိုတော့ ကျနော်တို့ ရောက်နေပြီ။ ပန်းတိုင်မှာတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ စပြီးတာထွက်တဲ့ နေရာတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ တနေရာရာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရောက်နေပြီ။ ဒီရောက်နေတဲ့ဟာကို တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင် နောက်တက်လာတဲ့သူက ရှေ့ကို ဆက်ပြီးတော့ တွန်းသွားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရင်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေ အကုန်ဖျက်၊ တစ်ကပြန်စဆိုရင် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည် နစ်နာမှာ။ ဒါတခုဘဲ ကျွန်တော်တို့က စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ တက်လာတက်လာ။ ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည် အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဒါ ကျွန်တော်တို့က သဘောကျတာပေါ့ဗျာ။ ခုနကလို။ နော်။
မေး။ ။ ကျွန်တော်က မေးထားတာက သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်သာ ဒုတိယ သက်တမ်းမှာဆက်လုပ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဆက်လုပ်ဖို့ရော ဆန္ဒရှိသလား၊ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေများ ထပ်ပြီးတော့ အထူးတလည် အာရုံထားဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စလေးပေါ့။
ဖြေ။ ။ အဲဒီတော့ ကျနော် ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဖို့ မလုပ်ဖို့ ဆိုတာ၊ ဒီကိစ္စလည်း ကျွန်တော် အမြဲတမ်းဘဲ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခုနကလို ကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်အရွယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ၊ ဟိုဒင်းအရ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နားချင် ပြုချင်တယ်ပေါ့။ သို့သော်လည်း ခုနကလို တိုင်းပြည်က ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ။ ဒါတွေလည်း ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ ဒီကနေ့ တာဝန်ရှိတဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့။
တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ။ နော် ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရပါမယ်။ အဲ့တော့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ ဟို မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်ဘဲလုပ်လုပ် ဘယ်သူဘဲ လုပ်လုပ် ခုနက ကျွန်တော်ပြောသလိုပါဘဲ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေက ဘာတွေလည်းဆိုတော့ တစ်အချက်က တိုင်းပြည်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ လုပ်စေချင်တယ်။
နောက်တခုက တိုင်းပြည်ရဲ့ လူမှု အကျိူးစီးပွါးတွေ တိုးတက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်စေချင်တယ်။ လူမှုစီးပွါးဘ၀ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တိုင်းပြည် ခုနကလို ကြွယ်ဝ ချမ်းသာဖို့အတွက် ပထမဦးစားပေးက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့သူတွေ၊ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြဘဲနဲ့ ခုနကလို စားနိုင်သောက်နိုင်အောင်၊ ထိုက်သင့်တဲ့ ပုံမှန်ဝင်ငွေတွေလေးရအောင်၊ သူတို့ သားသမီးလေးတွေ ခုနကလို ကျောင်းတက်နိုင်အောင်၊ နောက်တခါ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဆေးဝါးကုသနိုင်အောင်၊ ဒါ အခြေခံ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ချက်ပါဘဲ။ တဖက်က အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်စေချင်တယ်။ ဒုတိယကတော့ ခုနကလို တိုင်းပြည် စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ အခြေခံကောင်းတွေ ရှိတယ်။ ဒီအခြေခံကောင်းတွေကို ခုနကလို ကျွန်တော်တို့ အကျိုးရှိရှိနဲ့ အသုံးချပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခုနကလို တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်၊ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ ဘယ်သူဘဲ တက်လာတက်လာ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်သွားစေချင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သမ္မတကြီးခင်ဗျ။
ဦးသိန်းစိန်။ ။ အိုကေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း..။